မောင်ရင်ငတေ – ဟော်လန်ကော်နာမှသည် အမ်စတာဒမ် | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ရင်ငတေတို့အုပ်စု အမ်စတာဒမ်ခရီးကို စတင်ဖို့ ဘူတာရှိရာကို လမ်းလျှောက်သွားကြပါတယ်။ လူတသောင်း နေကြ တယ်ဆိုတဲ့ မြို့လယ်ရဲ့ စနေမနက်ခင်းက ခပ်ခြောက်ကပ်ကပ်သာပါ။ ဘူတာရုံ မရောက်ခင်အသွားလမ်းမှာ ရေကာတာလိုလို တာရိုးမမြင့်တမြင့်ကို ဖြတ်ကျော်ရပါတယ်။ လှေကား ဆယ့်သုံးလေးထစ်လောက်သာ ရှိတာပါ။ မမြင့်တမြင့်လို့ ပြောရတာက မောင်ရင်ငတေရဲ့ မွေးဇာတိ ဟင်္သာတက တာရိုးတွေလောက်တောင်မှ မမြင့်မားလို့ပါ။ မောင်ရင်ငတေ ဆယ်နှစ်သားကျော် အထိ အဲဒီလို တာရိုးတွေပေါ်မှာ ဆင်းတက်ဆော့ကစားခဲ့ဖူးလို့ ပြောနိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဟင်္သာတမြို့က ပင်လယ်ရေမျက်နှာ ထက်တော့ နိမ့်နေတယ်လို့ ပြောသံမကြားဖူးပါဘူး။ အဲ … ဒါပေမယ့် …. မြစ်ရေမျက်နှာထက် နိမ့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ မ ပြောတတ်တော့ပါဘူးလေ။ ထားပါ။
ဒီ Hoek van Holland က အင်္ဂလန်ကူးတဲ့ ရှေးဟောင်းဖယ်ရီ ကူးတို့ဆိပ်မြို့တမြို့ပါ။ အခုထိလည်း Stena Line ဖယ်ရီတွေက တနေ့နှစ်ကြိမ် ဟိုဘက်ကမ်းဒီဘက်ကမ်း ကူးသန်းနေတာပါ။ ဈေးနှုန်းက လူတယောက်ကိုမှ ယူရို ငါးဆယ်လောက်သာ ကျ သင့်တာဆိုတော့ သင်္ဘောကြီးက ကြီးသလောက် စီးခက ဈေးမကြီးလှပါဘူး။ မောင်ရင်ငတေတို့လို အင်္ဂလန်ဝင် ဗီဇာလိုအပ် သူများကတော့ တရားဝင်သွားချင်ရင် ဗီဇာတော့ ပါရမှာပေ့ါနော်။ အဲ …. ဒါပေမယ့် ဗီဇာမပါပါဘဲ သွားချင်သပ တရွရွ ဆိုကြ ရင်တော့ ဒီဆိပ်ကမ်းကနေ သွားလို့ရပါတယ်။ မောင်ရင်ငတေဆီမှာတော့ လာစာရင်းမပေးကြပါနဲ့။ မောင်ရင်ငတေ အဲ လောက် မစွမ်းပါဘူးခင်ဗျာ။
ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ဇိမ်ခံ ကူးတို့သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ အလွယ်တကူသွားနေကြတဲ့ Hoek van Holland ဆိပ်ကမ်း သဲသောင်ပြင် မှာ အင်္ဂလန်ဘက်ခြမ်း Harwich ဘက်ကိုကူးဖို့ ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ သင်္ဘောအလာစောင့်နေကြတဲ့ အဲဒီခေတ် ဂျူးခလေး ငယ်လေးတွေရဲ့ မျက်လုံးအိမ်တွေထဲမှာတော့ အခုလို သာယာအေးချမ်းတဲ့ ငွေရောင်သဲသောင်ပြင်ကျယ်ကြီးကို တွေ့မြင် နိုင်ကြမယ် မထင်မိပါဘူး။ အဲ … ဒါပေမယ့် … ဒါပေမယ့် တလုံးကတော့ မောင်ရင်ငတေ့ ထုံးစံအရ ထပ်လာပြန်ပြီပေါ့လေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာမှ အမှတ်တရ မမ်မိုရီယယ်အဖြစ်ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအရုပ်တွေကိုကြည့်မိရင်းနဲ့ အဲဒီ ဒါပေမယ့်ကို တွေးလိုက်မိရတာပါ။ သူတို့လေးတွေဟာ နာဇီဆိုးတွေရဲ့လက်က သွေးရူး သွေးတန်းနဲ့ ပြေးလာရသူတွေပါ။ ဝတ်စားထား တာတွေရော လူဝီဗီတွန်ကဲ့သို့ အိတ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ရော ပုံဖော်ထုထားတဲ့ ရုပ်တုလေးတွေကိုတွေ့ရတော့ အနှစ် ခွန်နှစ်ဆယ် ကျော်နီးပါး နောက်ကျပြီးတော့ ပြင်သစ်မြေကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ မြန်မာ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် အိတ်စပို့စ်လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ် ခဲ့သူ (အင်ကြီးနော်) မောင်ရင်ငတေရဲ့ ပါရီ ရှာလ်းဒဂိုလ်းလေဆိပ်အဝင်နေ့က ဝတ်လာခဲ့တဲ့ တိုင်နဲ့ကုတ် အနောက်တိုင်း ဝတ်စုံရယ် ကြောင်လျှာသီးနဲ့ အတက်ချီချီးပုံးကြီးရယ်ကို သတိတရ နောက်ကြောင်းပြန်လို့ တွေးတောမိလိုက်ရပါတဲ့ … ဒါပေမယ့် ဆိုတာကြီးကိုပါခင်ဗျား။ လူချင်းမတူတော့လည်း ကံဆိုးတာချင်းက ဘယ်လို တူနိုင်ပါ့မလဲလေ။